ISTICMAALKA HILIBKA DOOFAARKA BY UKRAINIANS KOR U KACAY - MAQAALLO
Isticmaalka hilibka doofaarka by ukrainians kor u kacay
Ukraaniyiin ayaa ku wada baabba'ay 827,000 ton oo ah hilibka doofaarka iyo hilibka hilibka ee 2016, oo ah 6.7% in ka badan sanadka ka hor. Waxaa soo tebiya Waaxda Lafagurista ee Ururka "Swine Ukraine" iyadoo la tixraacayo xogta Kulanka Wadahadalka Dhaqaalaha. Sanadkii hore isticmaalka doofaarka ayaa ka horreeyay heerka la saadaaliyay. Horaantii, bilowgii sannadka 2016, khabiiradu waxay sugayeen in ay hoos u dhigto nus kiiloogaraam ama 2.76%, laakiin waxay ku dhowdahay dhammaadka sanadka, saadaalinta ayaa isbeddelay. Celcelis ahaan, Ukraine, kororka isticmaalka hilibka doofaarka ayaa ahaa 7%. Sidaa darteed, sannadka 2016, ayaa macaamiisha maqaarku kordhay 1.3 kg doofaarka. Iyadoo doofaarku "ku guuleystay suuqa", digaaga iyo hilibka lo'da ayaa la cunay wax ka yar sannadka 2015 (6% iyo 2%, siday u kala horreeyaan), taas oo keentay in tirada qadarka ee isticmaalka hilibka qofkiiba uusan isbeddelin.
Waxaa haboon in la ogaado in celceliska sannadkii hore, dadka reer Ukraine ay si fiican u qiimeeyaan xaaladda dhaqaale ee hadda jira. Sida laga soo xigtay wakaaladda kormeerka GfK, waxay muujinaysaa in 40% ay ka sarreeyeen sanadka 2015. Dhamaadka dhammaadka sanadka, "farqiga" ayaa yaraaday, laakiin macaamiisha bishii hore ayaa ku fiicnaa xaalada maaliyadeed ee lacageed intii lagu jiray Bishii December 2015. Fiiro gaar ah sida ku xusan falanqeeyayaasha Kulanka Dhaqaalaha ee Dhaqaalaha, Isticmaalka hilibka ee Ukraine ayaa kordhin karta 2%. Tani waxay gacan ka geysan kartaa kordhinta isticmaalka hilibka digaaga.